PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-06-10 - EZENKOLO
Ilanga langeSonto - 2018-06-10 - Izindaba -
UMKHULEKO obungoLwesine ohambisana nomkhankaso othi #Sekwanele Stop The Killing” uqale ngegiya eliphezulu waba yimpumelelo.
Lo mkhankaso kuhloswe ngawo ukuqedwa kwesimo esishubile sokubulawa kwabantu Kwazulu-natal. Lo mkhuleko obusecoastlands Hotel, emhlanga Rocks, ubuholwa nguNdunankulu wakwazulu-natal umnu Willies Mchunu.
Kulo mkhankaso bekufike abezenkolo ezahlukene okubalwa kubo amanazaretha, amakrestu, amasulumane, amarasta, eyabomdabu, amahindu, neyamabahai.
Evula enkulumeni yakhe umnu Mchunu obephelezelwa ngowakwakhe umakhoza, uthe lo mkhuleko wawowonke amahlelo uqale mhla zingama-27 kweyedlule kanti uzoze usongwe mhla zingama-27 kuntulikazi (July) kepha kuzoya ngokuthi abaholi bamabandla bathini.
“Mhla ziyi-10 (namuhla) isilo samabandla ugoodwill Zwelithini sizobe sihola lo mkhuleko ondini lapho silindele ukuba abaholi bomdabu, nani makholwa nifike sibone ukuthi nizobuyiselwa emuva yini singajabula ngokuza kwenu.
"Kuzothi-ke mhla ziyisi-6 kuNtulikazi sibe nokhukhulelangoqo enkundleni Ugu Sports and Leisure, kumasipala iray Nkonyeni District, lapho zonke izifunda zizobe zihlangene khona kwazise kumanje ziwe ngamadolo zinxusa ongabonwayo ukuba kuphele ukubhekana ngeziqu zamehlo,” kubeka umacingwane.
Umnu Mchunu uthe: “Sithi sekwanele ngokubulalana ematekisini, ezikhungweni zemfundo ephakeme, emahositela, nokubulawa kwabesifazane, nobugebengu nje jikelele.
"Sifuna kube nokubuyisana kwabaxabene nabangaboni ngaso linye, kube nezithangami zokuxoxisana emiphakathini esiyakhele, nokunakekelwa kwalabo asebahlukumezeka ngaphambilini. Thina siyisizwe esikhulekayo, ngeke unkulunkulu angayizwa imithandazo yethu.”
Kucelwa ukuba kuzozonke izindawo abantu babe namathuba amancane okukhuleka nangezikhathi zokudla kunxuswe ujehova ukuba alethe uzinzo nokuthula ezweni. Kube nezinkulumo ezethulwe ngabebemele izinkolo ezahlukene.
Unkk Mamo Mkhize obethunywe ngudkt VVO Mkhize womsamo, owaziwayo ngolwazi lwamasiko uthe ucela ukuba zibuye emasisweni, abantu bazi ngemvelaphi yabo ngoba baningi abantu abafela ezindaweni ezi- ningi abangalandwanga, waze wabala ngisho amasosha omzabalazo imbala.
“Ngisho omandela baphuma emajele asibagezanga. Umuntu uyahlanzwa uma kade esesimeni sesinyama njengejele nakwezinye izindawo ezifuze lezo. Abantu abaxabana abathelelananga amanzi - izinto zayekelwa kanjalo,” kusho unkk Mkhize.
Owamahindu udokotela Ashwin Trikamjee uthe noma kungakhulekwa kushunyayelwe kangakanani indaba isemuva emakhaya.
Uthe kumele kuqalwe umkhankaso wokufundisa izingane ukuziphatha nenhlonipho - libunjwa liseva.
“Abantu babulalana bodwa nje, uma ungabheka izindlela abakhuliswa ngazo uzothola ukuthi umkhuba usemuva ekhaya. Asithi sikhuleka sishumayela kodwa kube kuqalwa kulungiswa emuva esizindeni somuntu,” kusho udkt Trikamjee.
Obemele inkolo yamasulumane umoosa Ahmed Olgal yena uthe akungalahlwa ithemba, unkulunkulu uyasibona sonke isimo. Uthe kumele kuvuselelwe onembeza babantu bamesabe unkulunkulu ngoba bonke abantu bangabakhe.
“Sinenhlanhla thina lapha eningizimu Afrika ukuba sikwazi ukuhlangana kanje sehlukene ngezinkolo zethu. Kumele simbonge ujehova ngalokho,” kuphetha yena.
Umbhishobhi Sthembiso Ngcamu obemele amakrestu usukume ngekhorasi kwanyakaza indlu, wabonga undunankulu ngesinqumo sakhe sokuba kubuyelwe kunkulunkulu uma izinto sezitsheka.
Uthe sonke lesi simo sobulwane esibhekene naso kulesi sifundazwe yimpi kasathane ayibhekise kuso - wathi izonqotshwa ngomkhuleko.
Sekuphethwa umnu Mchunu unxuse bonke abebethula izinkulumo ukuba bazilobe phansi ukuze zibe yiqoqo okuzothi uma sekuphethwa umkhuleko zifundwe zibe yikhambi kule nkinga.
Uthe nomphakathi onamakhono mawubhale imibono yawo uyithumele ehhovisi lakhe. Kuke kwaba nesikhathi lapho kunikezwe khona ithuba abafuna ukubeka amazwi ambalwa.
Ezintweni ezivelile kube khona ukukhononda kwabanye ngokuthi amakholwa ewodwa awezwani, baze bathi kukhona ngisho abagxekana ezinkundleni zokuxhumana okwenza ukuba abangakholwa bangabe besakholwa.
Uhlelo beluphethwe ngesizotha ngungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi unkk Weziwe Thusi. Umculo wethulwe nguhlengiwe Mhlaba naye obe nethamsanqa lokuculelwa ngoba bekuwusuku lwakhe lokuzalwa.
UMAJOR Mageline Phore, oyisikhulu enhlanganweni ikwazulu-natal Christian Council, ube yingxenye yomkhankaso wokukhulekela ukuthula Kwazulu-natal.
UMBHISHOBHI Sthembiso Ngcamu WE-KZN Christian Council unyakazise indlu ngekhorasi ngosuku lomkhuleko obuhlelwe ngundunankulu Willies Mchunu emhlanga Rocks, ethekwini, ngolwesine.
UNGQONGQOSHE wezokuthuthukiswa komphakathi unkk Weziwe Thusi (kwesokunxele) nodokotela Ashwin Trikamjee wenkolo yamahindu besesidlweni sasekuseni kukhulekelwa ukuthula Kwazulu-natal.
UNDUNANKULU Willies Mchunu (kwesokudla ) ethokozela ukufika kukadr Oversee Sithole webandla lethe Twelve Apostles Church in Christ (kwesokunxele) nomvangeli Chansi Sibisi webandla lamanazaretha esidlweni sasekuseni emhlanga Rocks, kukhulekelwa uzinzo Kwazulu-natal.